England ga-ebuli mmachi niile COVID-19 na July 19 n'agbanyeghị agbanyeghị okwu ọhụụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » England ga-ebuli mmachi niile COVID-19 na July 19 n'agbanyeghị agbanyeghị okwu ọhụụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ka a na -ebuli mmachi ahụ, gọọmentị agakwaghị achọ ka ndị mmadụ na -arụ ọrụ site n'ụlọ, a ga -agbadakwa ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ kwere ka ha gaa n'ụlọ nlekọta.
A gaghị achọkwa nkpuchi ihu na ụgbọ njem ọha.
Ụlọ oriri na nkwari abalị England ga -emepe.
A ga -ekpochapụ oke nha mmadụ n'otu ụlọ ruo mmadụ isii.
Prime Minista Britain Boris Johnson kwupụtara nke ahụ England ga-agbada ihe mgbochi COVID-19 niile fọdụrụ, gụnyere mmachibido iwu niile na July 19. Prime Minista mere ọkwa ya n'agbanyeghị mmụba nke ikpe coronavirus ọhụrụ na atụmanya ọnwụ karịa site na nje ahụ.
Agaghị achọkwa nkpuchi ihu na ụgbọ njem ọha, ụlọ oriri abalị ga -emepe ọzọ na njedebe nke nha otu n'ime ụlọ nke mmadụ isii ga -akagbu, Johnson kwuru na nnọkọ mgbasa ozi.
Oke ndị ọzọ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ n'agbamakwụkwọ na olili ozu ga-akwụsịkwa, dị ka ihe ndị na-adọpụ uche mmadụ na ịmachi ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ toụ toụ na naanị ọrụ tebụl.
Johnson kwuru na England ka na-ahụ ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ọrịa COVID-19 na nnabata ụlọ ọgwụ, na-adọ aka na ntị na enwere ike nwee ikpe 50,000 kwa ụbọchị site na July 19.
Ọ sịrị, "Anyị ga -emekọrịta onwe anyị n'ụzọ nwute na ọtụtụ ọnwụ sitere na COVID," ka o kwuru, na -agbakwụnye na gọọmentị ga -eme mkpebi "kpachapụrụ anya na nke ziri ezi" na mgbochi.
Johnson kwuru na ọ na -atụ anya na gọọmentị ga -enwe ike ibuli ọtụtụ ihe mgbochi ndị fọdụrụ na July 19, na nyocha nke data ahụike ọhụrụ ewepụtara maka July 12.
Usoro nnwale, usoro nchọta na ikewapụ nke mba ga-anọgide na-arụ ọrụ site na Julaị 19, Johnson kwuru, n'agbanyeghị na gọọmentị na-eleba anya na nhazi dị iche iche maka ndị nwere ọgwụ mgbochi yana ụmụaka. Ndị mmadụ ka ga-anọrọ onwe ha ma ọ bụrụ na ha nwalee ihe ọma maka nje a ma ọ bụ nye ha iwu ịnọrọ iche site na NHS Test na Trace.